» प्रचण्डले पोखे कुण्ठा: ओलिले अध्यक्ष बनाउछु भनेर सबैलाइ सडकमा पुर्याए, अब हाम्रो पालो पावर देखाउने! (भिडियो सहित) प्रचण्डले पोखे कुण्ठा: ओलिले अध्यक्ष बनाउछु भनेर सबैलाइ सडकमा पुर्याए, अब हाम्रो पालो पावर देखाउने! (भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
प्रचण्डले पोखे कुण्ठा: ओलिले अध्यक्ष बनाउछु भनेर सबैलाइ सडकमा पुर्याए, अब हाम्रो पालो पावर देखाउने! (भिडियो सहित)
2020, December 30th, Wednesday
admin 388 Views
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो पार्टीको मान्यताका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री जोडी झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि प्रचण्ड र खनाल र नेपालले सडकबाटै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यसमा सबैको ध्यान केन्द्रित रहेको छ ।
हिजो, प्रचण्डको टोलीले रोडमा एक ठूलो जुलुस र विरोध आयोजना गरेको थियो, जहाँ उनीहरू केपि ओलि संग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई लोलीपप देखाए र उनीहरूलाई वर्षौंको लागि मूर्ख बनाए जसको कारण उनीहरू विरोधको लागि सडकमा उत्रिए। नेपाल र खनालसँगै प्रचण्डले पनि केपी ओलीले लोलीपप देखाएर कसरी उनीहरूलाई मूर्ख बनाए भन्ने कुरा व्यक्त गरेका छन।
प्रचण्ड भन्छन्, “केपी शर्मा ओली एकदम चतुर छन, जसले हामीलाई सडकमा ल्यायो। उनले हामीलाई सधैं मन्त्री आश्वासन देखाएर धोका दिए। जब हामी उनलाई भेट्छौं र मूर्ख बनाउँछौं तब हामीलाई अध्यक्ष बनाउँदछ। हामीले उनलाई हर चोटि विश्वास गर्थ्यौं तर उसको योजना केहि फरक थियो र अब हामी उनको बिरूद्ध बिरोधमा छौं। ”
प्रचण्डले यो पनि दाबी गरे केपी शर्मा ओली वैशाख सम्म मात्र प्रधानमन्त्री हुन्। त्यस पछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन पाउने छैनन् र उनको भविष्यको प्रचण्डले दावी पनि गरेका छन।